အလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းကျောက်ချစခန်း, Fairbanks, Juneau, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီး AK လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 888-200-3292 စီးပွားရေးအဘို့အ Alaska ဧရိယာ မှစ. သို့မဟုတ်ရန် Fly မှအချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုကိုးကားဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျ Alaska အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာတစုံတခုရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သင့်ထံမှသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ, alaska ဧရိယာ '' တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏ဗလာပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်အနီးဆုံးလေဆိပ် & ကျောက်ချစခန်းထဲက, Fairbanks, နှင့် Juneau, alaska ဇိမ်ခံကားစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အသေးကနေအားလုံးဂျက်အမျိုးအစားများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်, အလယ်အလတ်, ကြီးမားသောပင်ဂျမ်ဘိုဂျက်လေယာဉ် . ကိုးကားထံမှမည်သည့်အာကာသလေယာဉ်လေကြောင်းလိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ, Hawker, လီယာ, သိမ်းငှက်, အန်တုသူ, Gulfstream, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကို, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးအတွက်ဘိုးအင်းစီးပွားရေးဂျက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်. ကျနော်တို့နာရီအနည်းငယ်နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်. Fairbanks မှာသင်၏နောက်ဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်မှအကောင့်အမှုဆောင်အရာရှိကိုခေါ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ 888-200-3292.
Amook ဂလားပင်လယ်အော် AK81 TO သို့ Amook ဂလားပင်လယ်အော်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း 31
ဝက်ဝံ Creek အဘိဓါန် AK02 ဝက်ဝံ Creek အဘိဓါန် 1 လေဆိပ် (ကိုလညျးရှု ဝက်ဝံ Creek အဘိဓါန်3လေဆိပ်)
ခေါင်းလောင်းကျွန်း KBE KBE ခေါင်းလောင်းကျွန်းရေပူစမ်းရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
ပင်လယ်ဓါးပြများက BLG BVU PABG ပင်လယ်ဓါးပြများကလေဆိပ် GA 1,370
ဖယောင်းတိုင် AK75 CDL ဖယောင်းတိုင်2လေဆိပ် 10
ကိပ်ဆုံးဖြတ်ချက် CDE ကိပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မီးပြတိုက်ရဟတ်ယာဥ်ကွင်း (ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ရဟတ်ယာဥ်ကွင်းခဲ့သည်)
ကိပ် Yakataga 0AA1 CYT Yakataga လေဆိပ် (ယခင်က FAA: CYT, ICAO: PACY)
Chena ရေပူစမ်း AK13 CEX Chena ရေပူစမ်းလေဆိပ်
Deadhorse AK15 DQH PALP alpine လေယာဥ်ဆင်းကွင်း
Deadhorse AK78 PABP Badami လေဆိပ်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လမ်းဆုံ AK77 အားလုံးအနောက်လေဆိပ် 120
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လမ်းဆုံ 76AK တော့ Pogo မိုင်းလေယာဥ်ဆင်းကွင်း 19
Egegik AK96 BSZ Bartletts လေဆိပ်
Ekuk KKU KKU Ekuk လေဆိပ်
Fairbanks MTF MTX Metro ဖျော်ဖြေမှု
ခှဲခှါခွငျး 0Aa4 FWL နှုတ်ဆက်လေဆိပ် 3
Hannum Creek အဘိဓါန် AK74 အထက် Hannum Creek အဘိဓါန်လေဆိပ်
Hawk ရဟတ်ယာဉ်ဝင်ပေါက် HWI HWI Hawk ရဟတ်ယာဉ်ဝင်ပေါက်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
Herendeen ဂလားပင်လယ်အော် AK33 HED Herendeen ဂလားပင်လယ်အော်လေဆိပ်
Hinchinbrook 2AK5 PAJO ဂျွန်စပွိုင့လေဆိပ်
ဟိုးမား 46AK ဝက်ဝံ Cove လယ်ယာလေဆိပ်
ဟူစတန် 80AK Morvro ရေကန်ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း (ယခင်က FAA: 4K2)
icy ဂလားပင်လယ်အော် 19AK အေးခဲနေသော icy ဂလားပင်လယ်အော်လေဆိပ်
Kenai 3AK5 DRF နစ်မြစ်လေဆိပ်
Kuparuk UBW အလုပ်သမားဥပဒေ အနည်းဆုံး Ugnu-Kuparuk လေဆိပ်
မြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ AK45 မြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ2လေဆိပ် (ကိုလညျးရှု မြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ 1 လေဆိပ်)
McGrath AK40 နစ်ဆင်ချိတ်မိုင်းလေဆိပ် 3
Nabesna အိဗ် နတ်ဆိုးတောင်တန်း Lodge လေဆိပ်
Nanwalek AK07 ခွေးငါးပင်လယ်အော်လေဆိပ်
Npamute 4AK8 Napaimute ရှေ့ဆောင်လေယာဉ်ကွင်း
Nikiski AK11 အမြင့် Vista ကလေဆိပ်
Nikolski Iko Iko PACKAGE တွင် Nikolski လေတပ်စခန်း 196
ဆိပ်ကမ်း Alsworth TPO PTA ဆိပ်ကမ်း Alsworth လေဆိပ် 3,581
ဆိပ်ကမ်း Alsworth AK51 Wilder / Natwick လေဆိပ်
အနီရောင်ခွေးမိုင်း DGG RDB PADG အနီရောင်ခွေးလေဆိပ် (ယခင်က FAA: AED, ICAO: PARD) [NB 5] 10,558
ရုရှားမစ်ရှင် 9AK2 ဘယ်လိုလေဆိပ်
Selawik 8AK3 Roland က Norton သတိရအောက်မေ့လေယာဥ်ဆင်းကွင်း (ယခင်က FAA: 91တစ်ဦး)
ဆား DDT Duffy ရဲ့သက်သေမပေါ်လေဆိပ်
တေလာ AK49 TEC တေလာလေဆိပ်
Tikchik AK56 KTH Tikchik Lodge ရေယာဥ်ပျံအခြေစိုက်စခန်း
ယူ 8AK9 ယူ2လေဆိပ်
ထရေးဒင်းဂလားပင်လယ်အော် 5AK0 ထရေးဒင်းဂလားပင်လယ်အော်ထုတ်လုပ်မှုလေဆိပ် 19
Tyonek TYE TYE Tyonek လေဆိပ် 1,892
ကျောက်ချစခန်း, AK ဟိုးမား, AK Ketchikan Sitka, AK
ဗေသလမြို့ Juneau, AK Kodiak Wasilla, AK
Fairbanks, AK Kenai, AK မိုဘိုင်း
ပဋိညာဉ်စာတမ်းလေယာဉ်နယူးမက္ကဆီကို | ငှားကျောက်ချစခန်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်